Biriten oo uga digtay Midawga Yurub in ay ka gaabiyan la dagaalanka kooxaha burcad badeda Somalia
Biriten oo uga digtay Midawga Yurub in ay ka gaabiyan la dagaalanka kooxaha burcad badeda Somalia.
Taliyaha hogaaminaya hawgalka la dagalanka kooxaha burcad badeda Somalia oo ku sugan gacanka cadan ayaa uga digay midawga yurub in ay gabi ahaanba soo gaba gabeeyaan hawgalka lagula dagalamo kooxaha burcad badeda Somalia hadii ay timaado dhibato dhanka maliyada oo soo wajaha midawga midasi uu tilmaamay in ay xoojin karto weerarada koxaha burcad badeda Somalia ay ku wadaan goobaha ka baxsan xeebaha wadanka Somalia.
Sunday Express ayaa shegtay in Admiral Dankan Botis uu u xaqiijiyay xubnaha ururka midawga yurub in aysan xiligaani xoojinayn hawgalka lagula dagaalamayo koxha burcad badeda Somalia taasi oo taliyaha uu shaca ka qaaday in ay soo ifabaxday weeraro cusub ay sameyen koxaha burcad badeda Somalia.
Waxa uu hadalkisa intasi ku daray in kooxhaasi ay qaaden weeraro garaya 34-weerar 12-kii bilod ee lasoo dhafay kuwasi oo 5-kamid ah weeraradasi ay gacanta ku dhigeen maraakib iyo shaqalihi sarnaa marka loo bar bardhigo 176-weerar ay sameyen sanadii 2010-ki waxana xiligasi gacanta ay ku dhigeen 47-markab.
Jariidada ayaa shegtay inj guulihi laga gaaray kooxaha burcad badeda Somalia ay qeyb ka tahay ilaalo hubaysan oo dawladaha qarkod ay u sameyen marakibtooda ganacsiga eek u socdaalaya xeebaha wadanka Somalia.
Waxase jira cabsi ku aadan in dawlada biriten oo kamid ah dawladaha ka qeyb qaadanaya ladagalanka burcad badeda Somalia in ay qorshenyso in qar kamid ah marakibta dagaalka ay dib ugu celiso biriten.
Dawlada biriten ayaa bishi Febwari sanadii 2011- waxa ay marti galisay kulan weyn oo ay ka qeyb galeen in kabadan 50-maadxweyne oo loga hadlay hour marka wdanka Somalia iyo sidi loo wajihi lahaa dhibatada koxaha burcad badeda Somalia.